Public Health in Myanmar: Gallstone
သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း(gallstone) ဆိုတာက မာကျောပြီးကျောက်ခဲနဲ့ တူတဲ့အရာမျိုး သည်းခြေအ်ိတ်ထဲမှာ စုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သည်းခြေအိတ်(gallbladder) ဆိုတာက အသည်းကနေ သည်းခြေပြွန်(bile duct)မှတဆင့် အူထဲကိုစီးဆင်းနေတဲ့ သည်းခြေရည်(bile) တွေ စုဆောင်းထားတဲ့ အိတ်ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သည်းခြေရည်က အစာခြေရာမှာ ကူညီပေးတဲ့ အရည်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီတွေကို ချေဖျက်တဲ့နေရာမှာ သည်းခြေဆား(bile salt) တွေက လွယ်ကူစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ သည်းခြေရည်ထဲမှာ ဆားအပြင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ အဆီခဲ၊ ဘီလီရူဘင် တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကော်လက်စရော၊ billirubin ဘီလီရူဘင်တွေ သည်းခြေအိတ်ထဲမှာ လိုအပ်တာထက် ပိုမို စုလာတဲ့အခါ သည်းခြေမှာ ကျောက်တည်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းက လက္ခဏာတွေ၊ ပြသနာတွေ မပြတတ်ပါဘူး။ အချို့သည်းခြေကျောက်တွေက အူတွေကတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဖက်ကို ထွက်သွားတတ်ကြပါတယ်။ သည်းခြေအိတ်ရဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့နေရာမှာ ကျောက်သွားတည်ရင်တော့ သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဆီတွေများတဲ့ အစာစားပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာ သည်းခြေအိတ်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားက သည်းခြေရည်တွေကို အူတွေထဲကို ညှစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ကြွက်သားတွေက သည်းခြေကျောက်ကို ညှစ်လိုက်မယ် ဒါမှမဟုတ် သည်းခြေကျောက်က စီးဆင်းနေတဲ့ အရည်တွေကိုသာ ပိတ်ဆို့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ သည်းခြေဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နာကျင်ပြီး ကိုက်ခဲလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်းခြေကျောက်က စီးဆင်းတဲ့ပြွန်မှာပိတ်နေပြီး သည်းခြေရည်တွေ အူထဲကိုစီးဆင်းလို့ မရဘူးဆိုရင်တော့ တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေပါပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ သည်းခြေကျောက်တွေက စုပုံပြီး သည်းခြေအိတ်၊ အသည်း(liver)တွေမှာ ပိုးဝင်စေတဲ့အပြင် အနီးအနားမှာရှိတဲ့ သရက်ရွက်(pancreas)ကိုပါ ယောင်ရမ်းစေပါတယ်။
သည်းခြေကျောက် အဖြစ်များနိုင်တဲ့သူတွေကို 5F လို့ အလွယ်တကူ မှတ်သားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁။ Female အမျိုးသမီးများ
၂။ Forty အသက် ၄၀ကျော်တဲ့သူများ
၃။ Fertile သန္ဓေအောင် သောသူများ
၄။ Fat ၀သောသူများ
၅။ Flatulence လေပွတတ်သော အလေ့ရှိသူများ လို့ဆိုပြီး အကြမ်းဖျင်းမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။
သည်းခြေကျောက် အသက်၆၀အရွယ် မိန်းမငါးဦးမှာ တစ်ဦးဖြစ်လေ့ရှိတာကိုတွေရပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ သူတွေနဲ့ အ၀လွန်တဲ့လူတွေ သို့်မဟုတ် ရုတ်တရက်ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းတဲ့ သူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အကြိမ်များစွာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖုး၍ အီစတိုဂျင်ဟိုမုန်း(estrogen) အများအပြားကို ကြာရှည်စွာ သုံးစွဲခဲ့သော အမျိုးသမီးတွေ၊ သန္ဓေတားဆေးသုံးစွဲတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ သွေးဆုံးပြီးနောက် အစားထိုးဟိုမုန်းတွေကို သုံးစွဲတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
ဒါဆို ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ပြတတ်သလဲ
သည်းခြေကျောက်တည်သူတွေရဲ့၈၀% က ရောဂါလက္ခဏာ ပြလေ့မရှိတဲ့အတွက် ကုသမှုလည်း မလိုပါဘူး။ အကယ်၍ သည်းခြေကျောက်တည်သူက အောက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာပြလာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်နေပါပြီ။
၁။ ၀မ်းဗိုက်မှာနာကျင်မှုကို ခံစားရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၀မ်းဗိုက်ညာဘက်အခြမ်းမှာ နာကျင်တတ်ပြီး သည်းခြေအိတ်ကလာတဲ့ နာကျင်မှုက ၁၅မိနစ်မှ နာရီများစွာ ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။
၂။ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေက သည်းခြေအိတ်ကို ကျုံ့ခြင်း၊ ဆန့်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်သဖြင့် အဲဒီလို အစား အစာတွေကို စားမိတဲ့အခါ နာကျင်မှုကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေပါတယ်။
၃။ လေချဉ်တက်တာ၊ မူးဝေတာ၊ အစားအသောက်ပျက်လာတာ တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းက အခြားနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ သရက်ရွက် ယောင်ခြင်း၊ သည်းခြေပြွန်၊ သည်းခြေအိတ်တွေမှာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ထိုနောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါ အသားဝါခြင်း၊ ဖျားခြင်းနှင့် ၀မ်းဗိုက်တွင်နာကျင်ခြင်းတို့ကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ပြီး သိနိုင်မလဲ
သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းက X-rays ရိုက်လျှင် ဖော်ပြလေ့မရှိပါဘူး။ ultrasoundဖြင့်သာ အလွယ်တကူ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ultrasound သို့မဟုတ် CT scan မှာတွေ့သော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာပြ၊မပြ ဆိုတာကတော့ ခွဲခြားရခက်ပါတယ်။ အကယ်၍ သည်းခြေကျောက်က သည်းခြေရည်သွားလာမှုတွင် ပိတ်ဆို့နေပါက ultrasound တွင် သည်းခြေပြွန်ကြီးနေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
သေးငယ်တဲ့ သည်းခြေကျောက်လေးတွေဟာ သူ့ဖာသာ ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဖက်ကို ထွက်တတ်သလို အူတွေမှတဆင့်လည်း ထွက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ကျောက်တွေဟာ သည်းခြေအိတ်အတွင်းမှာ အနေအထားပြောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ဖာသာ ကောင်းသွားနိုင်သော်လည်းပဲ ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့ သည်းခြေကျောက်တဲ့သူတွေဟာ ဒဏ်ရာကိုသက်သာစေရန် ခွဲစိတ်ကုသမှုကို လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် ခွဲထုတ်ပြီးသည့်တိုင်အောင် ဒဏ်ရာရဲ့ လက္ခဏာကတော့ ပြသနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အလိုလို သက်သာသွားတဲ့ သည်းခြေကျောက်တွေတောင် ၂နှစ်အတွင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာ ပြန်ပြနိုင်ပါတယ်။
သည်းခြေမှာ ကျောက်မတည်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ
ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါက သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း အဖြစ်နည်းပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်အလေးချိန်က တက်နေပါက ကိုယ်အလေးချိန် ချက်ချင်း ကျစေသည့် လုပ်ရပ်များ(နေ့စဉ်၅၀၀ ကယ်လိုရီထက် လျှော့ကာသုံးစွဲခြင်း) ကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
ပဋိသန္ဓေဆေးနဲ့ ဟော်မုန်းဆေးအစရှိတဲ့ ဆေးတွေက သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းကို အဖြစ်များစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သည်းခြေကျောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြားအခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ ပဋိသန္ဓေဆေးနဲ့ ဟော်မုန်းဆေးများ သုံးစွဲခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းသည် အမေရိကန် အင်ဒီယန်တွေ၊ သွေးနီဥပုံသဏ္ဍာန် မမှန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းရောဂါဝေဒနာရှင်များနဲ့ အကြိမ်များစွာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းအကြောင်း အတန်အသင့် သိပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်။ ကျမ ဖတ်မိသမျှ ပြန်ဖော်ပြပေးထားတာပါ။ အခုလို ဖတ်ပေးကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
Posted by မေပျို
Labels: Gall bladder, Gall stone, Hepatobiliary system
thank you for sharing it .i already operation my gall bladder ....so what should i do in further....
Really appreciate that for sharing this knowledge as i has been suspected gallbladder increased.
I am really worried about that and according to the ultrasound reports, my gallbladder wall is increased from 0.6 cm * 1.1 cm to 0.7 cm * 1.1 cm. Really appreciate that i can get the any advise about it.Thank you.
thank you for ur information. I'm going to copy and post on my site to know other. thank you.
NGOs in the Golden Land
Habit vs Health
About Title and Body Fonts